Mmetụta Semalt na-ekpuchi Ọdịnaya Ntanetị Weebụ
Ọtụtụ ndị na-achọta nchịkọta weebụ na-ewe ihe ubi dịka ụzọ dị mkpa nke inweta ozi. Enwere ike ịnakọta ozi weebụsaịtị dị ka ibe weebụ yana akụkụ ụfọdụ nke ebe nrụọrụ weebụ. Na omenala, nke a bụ usoro siri ike nke nwere ike ịgụnye onye ọrụ na-echekwa ibe nke saịtị. Onye nwere ike ịchọta ngwanrọ ihe ntanetị weebụ kwesịrị ekwesị iji mepụta usoro a. Ngwa ngwongwo ọdịnaya nwere ike nwee ike ịrụ nnukwu ọrụ nchịkọta data gụnyere ọtụtụ nde peeji nke otu ụbọchị. Ọzọkwa, ngwá ọrụ ndị a nwere ike ịmepụta ụfọdụ n'ime usoro nchịkọta data, na-eme ka nchịkọta akụkọ nụchaa.
Ihe ntanetị nke ihe ntanetị weebụ dịka ụja crawler. Ndị bọọlụ ndị a na-aga na ebe nrụọrụ weebụ dị ka ezigbo nchọgharị na-eme, na-eme ka ihe nkesa ahụ yiri ka ọ na-abịa site n'aka mmadụ. Ha nwere ike ịchekwa onye ọrụ ọtụtụ oge yana ịkwado nkenke nke data anakọtara. Imirikiti ngwanro ahụ nwere interface interface enyi. Ndi mmadu nwere ihe omuma ma o bu ihe omuma ha nwere ike nwee ike ime oru ma obu abuo site na iji ihe ntanetiti web.
Ọdịnaya Web Extractor Usage
The Web Content Extractor bụ ngwá ọrụ ihe ntanetị weebụ nke nwere ike ịrụ ọrụ niile nchịkọta data. Site na ebe nrụọrụ weebụ mara mma, ọ ga-ekwe omume wepụ data data oge yana ozi ndị ọzọ dịka nkọwa ngwaahịa, amaokwu ụfọdụ, ihe nkiri ma ọ bụ ozi egwu, ọdịnaya, parse forex / ahịa ahịa ahịa. Ndị na-arụ ọrụ SEO nwere ike iji ngwá ọrụ a nweta ozi ndị asọmpi dịka usoro azụmahịa nke dijitalụ nakwa dị ka ibe weebụ meta. Ngwá ọrụ a nwere mgbanwe, interface a na-ahụkarị, na-eme ka atụmatụ ya dịkwuo elu. Ị nwere ike nwee ike iwe ihe ọ bụla ọdịnaya weebụ nke ụdị ọ bụla.
Maka nchịkọta data ngwa ngwa ma dị irè, Ngwaọrụ Web Extractor na-egosipụta bot nke dị ike na-anakọta data a. O di nkpa iji mata nkenke, ziri ezi, na uzo nke ngwa a puru ime oru ya. O nwekwara ike itinye ma ọ bụ wepu ụfọdụ akụkụ nke saịtị ahụ nke ịchọrọ ị nweta. Ọrụ a nwere ike ime site na URL dabara usoro. Dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji ihe ntanetịime weebụ a iji nakọta data meta ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ akụkụ ụfọdụ nke ebe nrụọrụ weebụ.
N'adịghị ka ngwá ọrụ nchịkọta data, otu nwere ike ịchekwa data weebụ na ọtụtụ ụzọ. Dị ka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike iwepụta ihe ọmụma weebụ ma chekwaa ya dị ka CSV ma ọ bụ faịlụ ederede. Ị nwekwara ike mbupụ na HTML ma ọ bụ XML. Enwere ike ịdebe data a na nchekwa data mpaghara ma ọ bụ ọbụna mbupụ gaa ebe dịpụrụ adịpụ. MySQL nchekwa data nwere ike dakọtara na ụdị ndị ọzọ nke ọdụ data gburugburu ụwa. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwere ike ibudata otu weebụsaịtị (ma ọ bụ akụkụ) ma chebe ya na nchekwa nchekwa mpaghara Source .